Haweenka Neerfo Xanuun Ayay Ka Qaadaan Kulan Sariireedka Noocaan Ah Ee Ninyahoow Habkaan Jooji. - Arimaha Bulshada
Waxaa xusid mudan hadii la doonayo in guul laga gaaro xariirka sariirta ee labada lamaane in midba uu dhowro dareemaha midka kale , hadaba ninyahoow caadooyin kaan haweenka aad ayay uga careysiiyaan marka kulanka socda ee iska badal .
In si toos ah uga dalbatid kulanka: waa midda uga daran ee haweenka neerfa xanuunka ku rida , waxa ay haweenka aaminsan yihin in kulankaan yahay kulan caadifadeed ee laga doonayo in ninka ku dareensiiyo lamanatiisa in uu rabo in uu hawada la galo isaga oo adeegsanaya xeelado eegmo , dhoola cadeyn , iyo taa-taabasho balse ma ah in aad la soo bood is geey sariirta , ninyahoow aan xariifka aheyn iska badal dabeecadaasi .
Ninka aan hadlin: in ninka iska aamusnaado marka kulanka macaan socdo waxa ay taasi damineeyso dareemaha xaaska , waxa ayna tani haweenka ku dhalineysa in aysan u baahan kulankaasi dansan ee hawada ka maqan .
In isla hadalkii lagu soo cel celiyo: ma haboona in ninka marka kulanka macaan uu ku jiro in uu hal eray uu ku soo cel celiyo taasi macaanka kulanka ayay yareneysaa , haweenka waxa ay mar waliba jecel yihiin in ay maqlaan erayo xod-xodasho cusub oo jaceyl uu ka muuqdo waayo farxad iyo kacsi ayay ka sii qaadeysa .
In Kulanka Lagu sameeyo hal goob oo cayiman: tani haweeneyda kacsi beel ayay ka qaadeysaa ee waxaa haboon in kulanka marba jawi nooc kale ah iyo goob nooc kale ah lagu sameeyo .
In aadan il gaar ah u yeelan dareemaheeda: in aad la socoto dareemaheeda xiliga kulanka waa arin aan laga maarmin , hadaadan la socon dareemaheda waxa ay haweeneyda ku qasbeysa in ay qariso dareemaheeda waxaana tani kulanka ay ka dhigeysa mid aan laheyn dha-dhan .